VIM အသုံးပြုခြင်း - အခြေခံသင်ခန်းစာ။ | Linux မှ
VIM အသုံးပြုခြင်း - အခြေခံသင်ခန်းစာ။
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါဒီလိုပြောမယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီထဲက terminal ရဲ့အကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်စွဲလမ်းနေတယ် GNU / Linux များ: VIM.
Vim (၏ အင်္ဂလိပ် Vi IMproved) သည်တိုးတက်လာသောဗားရှင်းဖြစ်သည် စာသားတည်းဖြတ်သူ viအားလုံးစနစ်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန် UNIX.
၎င်း၏စာရေးဆရာ, Bram Moolenaar, အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဗားရှင်းတင်ပြခဲ့သည် 1991များစွာသောတိုးတက်မှုများကိုခံယူထားသည့်ရက်စွဲ။ Vim နှင့် Vi နှစ်ခုလုံး၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ၎င်းတို့တွင်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော modes များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အသုံးအများဆုံးအယ်ဒီတာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းမှာအော်ဒါများကိုသော့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂရပ်ဖစ် interfaces.
ငါကဒီဟာ "ရေဘဝဲ" အတွက်လက်ညှိုး ၁၀ ခုထက်မကတဲ့အယ်ဒီတာလို့ထင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ၊ VIM က console အယ်ဒီတာများ၏ "နဂါး" ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တရားကတော့မနေ့ကကတည်းကဒီဟာကိုသုံးတတ်အောင်သင်ယူခဲ့တယ် (ပင်အလွန်အခြေခံအရာနှင့်အတူ) ဒါပေမယ့်ငါကရန်အသုံးပြုအဆိုးဆုံး, ငါတာပါ (သို့မဟုတ်အားလုံး၏အကောင်းဆုံး) ငါကအရမ်းကြိုက်တယ်ကြောင့်ပါပဲ
အစဉ်မပြတ်ငါဘယ်လိုအတူအဆင်ပြေပါပြီ nanoသို့သော်ဤအယ်ဒီတာသည်အလွန်အခြေခံကျသည်မှာမှန်ပါသည် ကျွန်တော်တို့မှာ graphical environment တစ်ခုရှိရင် cursor ကို copy / paste လုပ်နိူင်တယ်။ ဒါပေမယ့် TTY ထဲမှာရှိရင်အခြေအနေတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကငါ V ကိုရှာသောပထမ ဦး ဆုံးအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်IM။ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအခြားအင်္ဂါရပ်များမှာ
ကွင်း, ကွင်းခတ်နှင့်သတ္တုအထိမ်းအမှတ်များ၏မီးမောင်းထိုးပြ (ဒါကြောင့်ပရိုဂရမ်များအတွက်စံပြဖြစ်) ။
ဒီမှာ မင်းအများကြီးအများကြီးတွေ့နိုင်တာပေါ့ ...
console ထဲကတစ်ခုတည်းသော text editor (ငါသိသောသူများအနက်) ကြောင်းမှ "ချဉ်းကပ်" VIM es MCEdit၊ MC ၏စာသားအယ်ဒီတာ။ သို့သော်အထက်ပါဝါကျတွင်ဖော်ပြထားသောကိုးကားချက်များကိုသတိပြုပါ။ VIM တွင်ပင် GTK တည်းဖြတ်သူပင်ရှိသည်။ သို့သော်ဤစာမူ၏စိတ်ကူးသည်သင့်အားရောင်းရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်သူတို့ကိုအားပေးရန်မဟုတ်ပါ VIM၎င်းသည်သင်အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်သည်ထက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသင့်အားပြောရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ငါကမင်းကိုကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတွေဆက်တိုက်ထားဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါပြမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကပိုပြီးတော့လက်တွေ့ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ပထမဆုံးလုပ်မှာက install လုပ်လိုက်တာပဲ VIM ကျွန်ုပ်တို့အဆင်မပြေသေးလျှင် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ဝေမှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မလာရှိပါက။ ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ terminal ကိုဖွင့်လှစ်:
ယခုငါတို့သော့ကိုနှိပ်ပါ I ဒါမှမဟုတ်သော့ ထည့်သွင်း command mode ကနေ mode ကို edit လုပ်ပြီးစာရိုက်ဖို့စတင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်မျဉ်းနှစ်ကြောင်းထက်ပို။ ရေးသည်။ ငါဥပမာသွင်းသည်:
ယခုငါတို့သော့ကိုနှိပ်ပါ ESC edit mode မှထွက်ရန် keyboard မြားနှင့်စာရွက်စာတမ်း၏အစကိုရွှေ့ပြီး key ကိုနှိပ်ပါ V. သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောယခုသတိထားမိပါလိမ့်မယ် Visual။ အောက်သို့မြှားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသောစာသားအားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ အရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါ၊ သော့ကိုနှိပ်ပါ Y။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကူးယူထားသောလိုင်းအရေအတွက်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
ယခုငါတို့အနည်းငယ်အောက်သို့ရွှေ့နှင့်သော့ကိုနှိပ်ပါ P။ ၎င်းကိုနှိပ်တိုင်းတူညီသောစာသားကို paste လုပ်လိမ့်မည်။ အစားသော့၏ Y ကျနော်တို့သော့ကိုနှိပ်ပါ X, ငါတို့ရွေးချယ်စာသားကိုဖြတ်လိမ့်မည် သော့ကိုနောက်တဖန်ကူးထည့်နိုင်သည် P.
ယခုငါတို့စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်းကိုကယ်တင်သွားကြသည်။ ငါတို့နှိပ်ပါ ESC ငါတို့ကတည်းဖြတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးမယ် :wဆိုလိုသည်မှာအချက်နှစ်ချက်နှင့်တစ် W. ငါတို့လုပ်နေတာကိုရေး၊ သိမ်းပါ။ ငါတို့နောက်ပိုင်းရေးလိုက်လျှင် :q ကျနော်တို့အယ်ဒီတာမှထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်၊ 😡.
အခုနောက်ဆုံးလှည့်ကွက်တစ်ခု။ terminal ကိုမတော်တဆပိတ်လိုက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ငါတို့လုပ်ရမည့်အရာမှာပြန်လည်ရေးရန်ဖြစ်သည်။
သင်အဆုံးကိုကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ကိုနှိပ်ပါ R ပြီးခဲ့သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနှိပ်ခိုင်းလိမ့်မည် ENTER ပြီးတော့ voila၊ ငါတို့ဘယ်တော့မှထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်ရင်ငါတို့သော့ကိုနှိပ်ပါ E (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပါ) စာရိုက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းစာရွက်စာတမ်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည် : ပြန်လည်ရယူရန် ပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးရလိမ့်မယ်
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုသည်နံပါတ် ၁ နှင့် voila ကိုရေးရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပြန်လည်ရရှိသည်။
သင်အသုံးပြုလိုပါက VIM ပိုမိုလွယ်ကူလျှင်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည် GVIM၊ ၎င်းသည် Menus များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ၏လုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက် Gtk စာကြည့်တိုက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အဘို့အပင် extension ကိုရှိပါတယ် Firefox ကို ခေါ်ဆိုခ Vimperator၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ကို browser လိုပဲကိုင်တွယ်ခွင့်ပေးတယ် VIM 😀ဖြစ်လိမ့်မည်
ထိုအဝေး ဘယ်လို, ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းကိုပိုမိုအသုံးဝင်သောအရာလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်, မည်သည့်အကြံပြုချက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကြိုဆိုပါတယ် VIM.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » VIM အသုံးပြုခြင်း - အခြေခံသင်ခန်းစာ။
ငါ syntax မီးမောင်းထိုးပြကိုမမွငျခဲ့ပေမယ့်သင်ကအချို့သောစာသား၏ပုံရိပ်တွေကို HTML မှာထည့်သွင်းလျှင်အရာအလုံးစုံဘယ်လိုကြည့်ရှုဖို့ကောင်းတယ်လိုပေမယ့်ငါ Gvim ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါ Vim နှင့်အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်, ငါ Gedit နှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောနက်ရှိုင်းသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ခုလုပ် ... ငါ့ကိုတစ်ပါတ်ပေးငါရှိသည်။
သငျသညျ syntax မီးမောင်းထိုးပြဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ချင်လျှင်, ငါသင်တို့ကိုဥပမာနှစ်ခုထားခဲ့ပါ။
ပြီးတော့ပိုပြီးအမြင်အာရုံကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link တစ်ခု။ xP
အလွန် vim သင်ခန်းစာကောင်းပါတယ်၊ ဒီ tool ကိုနောက်မှအနည်းငယ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာမယ်သို့မဟုတ်ဒီ tool ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်လှည့်ကွက်များလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ),
ယခု vim ၏ဤလောကသို့ရရန်ယခုအချိန်တွင်
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အားမကြာခဏပိတ်မိနေသော emacs နှင့်အတူရှိနေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် vim သည်စာသားအကြားရွှေ့ပြောင်းရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။
PS: ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူတို့ကအဆင့်မှာပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ငါတို့ယောက်ျား Emacs ကိုသုံးတယ်
ငါစာစဖတ်တဲ့အခါ "ဒီအကြောင်းကိုငါပြောမယ်တော့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် GNU / Linux ပေါ်ရှိ terminal အတွက်အကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြခဲ့မိတယ် ... " ကိုစတင်ဖတ်ရှုတဲ့အခါငါကောင်းပြီ၊ သူ Emacs ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်!
အဲဒီအစားသူကကောင်လေးဟာကွန်ယက်မှာတွေ့တဲ့အရာတွေကို queers တွေနဲ့ထွက်သွားတယ်။
အိုးဒီ macho ။ ခင်ဗျားသုံးမယ်ထင်တယ် LFSဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အတူ distro ကိုသုံးတာကဒါက fagot ဟုတ်လားလို့ထင်လား။
Man emacs သည် vim ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်းအရသာအတွက်ဖြစ်သည်။
vimtutor သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်သင်ခန်းစာဖြစ်ပြီး ၂၅ မှ ၃၀ မိနစ်အတွင်းတွင်ပြီးစီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ Vimtutor ဟာကြီးပါတယ်
ဤဂိမ်းကိုကစားပါ။ ၎င်းသည်သင် vim ကိုမရပ်တော့ဘဲမိုက်မဲစွာအသုံးပြုတတ်ရန်သင်ယူပါလိမ့်မည်။ သင်ဤဂိမ်းနှင့်အတူ vim နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေခံအကျဆုံးအရာများဖြစ်သောသင်လျှင်မြန်စွာမည်သို့ရွေ့လျားရမည်ကိုသိရှိရန်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည် developer မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သည်မှာ - .conf တည်းဖြတ်ပါသို့မဟုတ်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်၏လက်များကို pkbuild ၌ထားပါ။ NANO ဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပြီးကျွန်ုပ်၌များများရှိသည်။ တစ်ခါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက် VIM မှာဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးအဲဒီကနေဘယ်လိုထွက်ရမှန်းတောင်မသိခဲ့ဘူး။
vim ဖြင့်စတင်သူများအတွက်အခြေခံကျသည်မှာငါပင်နဂါးကြီးဟုထင်ခဲ့သော်လည်းအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အလေ့အထတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ xP
@elav, သင့်အတွက် vimrc ကိုချန် ထား၍ သင်အတွက်အလုပ်လုပ်သော config အချို့အသုံးပြုနိုင်သည်
ငါ GNU / Linux ရှိ terminal အတွက်အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်သူအတွက်အရသာရှိသည်
သငျသညျဟမ်, မီးကိုဖြစ်ပေါ်စေလို? ၎င်းသည် the အသက်အကြီးဆုံးမီးလျှံဖြစ်နိုင်သည်
PS: VI ကျောက်ဆောင်
မက္ကဆီကိုကနေ Rene, လုပ်နိုင်တဲ့။ ဟုသူကပြောသည်
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ Rene ကိုလုပ်ပါ။
အရမ်းကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ။ ဒါပေမယ့်ငါကဒီဟာအသစ်ပါ၊ gvim ထဲကို brigthscript editor ဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး https://github.com/chooh/brightscript.vim.git ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား
Fedora 17 Beefy Miracle ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Ubuntu / Mint တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Radeon driver ထည့်သွင်းပုံ